I-Digital Twin -BIM + GIS-imigaqo evakalayo kwiNkomfa ye-Esri -Barcelona 2019 -Geofumadas
Meyi, 2019 ArcGIS-ESRI, ezintsha
I-Geofumadas ifihlile imicimbi emininzi enxulumene nesihloko kude kunye nomntu; Thina uvale lo mjikelo ngekota 2019, kunye nokuya kwiNkomfa Umsebenzisi ESRI e Barcelona - Spain 25 Epreli eyayibanjwe kwi-Institute of Geology and cartography of nase- (ICGC).
Ukusebenzisa i-hashtag #CEsriBCN, lethu akhawunti ye twitter Sinike ingxelo ngalo msitho apho, ngaphandle kwabameli be-Esri Spain, sikwazile ukubona abaphandi, abadlali beziko kunye neenkampani ezisebenzisa isoftware njengangoku. I-Modesto, xa ithelekiswa neminye iminyhadala ebesikhe sathatha inxaxheba kuyo, umsitho wawungenakubekwa mgangathweni, ubeka phambili kwiingcaciso-ntetho nakubasasazi. Ngokubanzi, i-ajenda yahlulwe yaziitafile ezi-2 ezijikeleze ngaxeshanye, iipunnaries kunye nemiboniso egxile kwiinto ezintsha zeshishini zeArcGIS, umanyano neSAP, AutoDesk kunye neMicrosoft.
Ngezantsi siza shwa nkathela iinkalo eziye zathatha ingqwalasela yethu kakhulu kwiindlela zethu zobunjineli.
Kwixesha elizayo sihamba kunye ...
Kwasekuqaleni yayinomdla, itafile ejikelezayo apho izihloko ezinje ngokudityaniswa kwe-BIM kunye neArtificial Intelligence (AI) ezifakwe kwi-GIS zaxoxwa. Oku kwakukhokelwe nguMartí Domènech Montagut ovela kwiCandelo lobuChwepheshe boShishino kunye neeNkonzo zeeNkqubo, u-Ilse Verly umele u-Autodesk no Xavier Perarnau SeysTic. Ngaphezu kokuthabatha umdla ngenxa yokubaluleka kwesi sihloko, eshukumisa isofthiwe kunye nabavelisi bee-hardware ze-Geo-ingunjineli. Ukubona isihloko se-BIM kwezi ntlobo zeenkomfa, ezazigxile ikakhulu kumhlaba we-geospatial, zombini i-BIM kunye nobukrelekrele bokuzenzela kunye namawele edijithali, kunceda ekuboneni ikamva apho izisombululo ziya kwenza iipakeji ezincedisayo ekuhambeni apho umsebenzisi aza kusebenzisa okona kulungileyo. izixhobo, zombini ezasimahla nezabucala kodwa phantsi kwendlela yomhlaba ehlanganiswe kuthungelwano lwemveliso. Isikhundla se-ESRI siphawulwe kakhulu, ekuqhubekeni nokwakha ubudlelwane obuvumela intsebenzo yeetekhnoloji ezininzi, imeko esiyiphosileyo kwi-BIMSummit 2019 esandula ukwenzeka apha e-Barcelona, ​​apho zimbalwa iinkampani ezithethileyo ngento eziyenzayo ukuze zingashiyi bucala Indawo eziguqukayo kwisakhelo sokwakha-ukusebenza komjikelo wobomi (AECO).
Ukukhuthazwa kwekamva kwi-4ª ye-Industrial Revolution, ukubaluleka kweGooSpatial Cloud.
Emva kokuba wamkelekile ngu uJaume Masso, uMlawuli we-Institut Cartogràfic i yokwakheka de Catalunya (ICGC), laqalisa ungenelelo umdla Angeles Villaecusa - uMlawuli Jikelele e ESRI Spain, lowo waphula umkhenkce kunye ividiyo kuhlekisa ubonisa ngokungazi oko ngokwenene, ukusebenzisa nokusetyenziswa kwe-GIS. Out of the jocular, ividiyo kwenza kucace ukuba Geographic Information System ungaphezulu kakhulu sisixhobo esisetyenziswayo ngokungqongqo ngenxa mapping.
Inkcazo-ntetho enomxholo othi Esri GeoSpatial Cloud: Ukukhuthaza ikamva kwi-4 Industrial Revolution, ejolise ekwaziseni ngokubaluleka kwelifu le-GeoSpatial kwiinjongo zokusebenza, ukusebenza kunye nokudityaniswa okushukumisela ushishino ngokubanzi kodwa kwimeko yethu kuphawula Ingqondo yeSmartCities.
I-Villaescusa, yabonisa iqela lokuba kukho abathengi beemveliso ze-ESRI kunye neenkonzo kwiindawo ezininzi abazi, njengokuba Inkampani yeWalt Disney, esebenzisa i-GIS ukubonisa imida yeefilimu zayo, ezenza ukuba zifuphi ngokunyaniseka kwazo ngokusebenzisa idatha yelizwe.
Ukuba nabani na ochukumise ukuba babone iifilim zoopopayi, ndikuxelele ukuba mna bendingazi ESRI ngaphandle iikhredithi ekupheleni umboniso The Incredibles, yaye babengazi ukuba uguqulelo Blade Runner ESRI zakutshanje ukuba inxaxheba ekubumbeni izigcawu.
Inyaniso kukuba yonke imihla iinkampani zifuna ukusetyenziswa kwedatha ye-geospatial kwiiprojekthi zabo, ukulungiselela imodeli yokwakha, ukuvavanya i-dynamics, kwaye emva koko ukulawula ukusebenza. Esi sizathu sokuba kutheni ukuba amanyathelo alungiselele ukusetyenziswa kakubi kwedatha efana ne-SAP okanye i-HANA, ephendulela amehlo abo endaweni, ayimangalisi.
I-ArcGIS Platform Key
U-Aitor Calero, ojongene noThnoloji kunye ne-Innovation yase-Esri - iSpanish, wanikezela oko kuza kwixesha elisondeleyo kwiqonga le-ArcGIS. Kwintetho yakhe wachaza ukuba izixhobo ezitsha ezenza umndeni we-ESRI zinganikezela ngexabiso elongezelelweyo lokuxhaswa kwee-SmartCities kunye neeDigital Digital (Amacwecwe adijithali).
Kwaqala ngokusebenza kweHovisi ye-ArcGIS, imizekelo yokucwangcisa kunye nokuphathwa kwendawo 3D kunye ne-Urban kwi-platform ye-ArcGIS, exhasa ngendlela ethile ukwamukelwa kwamawele edijithali. Kwakhona wabonisa ithuluzi le-cadastre yangaphakathi ne-ArcGIS Indoors-kunye nale sixhobo kunokwenzeka ukusebenzisa i-2D ne-3D iimephu, iziboniso kunye nokubeka ngokucacileyo ukuphathwa kwe-asethi.
Ukongeza, wabonisa ukusebenza kwezicelo ezifana neTracker for ArcGIS. Esi sixhobo sokugqibela sokubeka esweni abasebenzi abenza uphando kwintsimi, abanako ukwabelana ngendawo yabo, banokuba nombono omkhulu womsebenzi owenziwa ngumntu kwindawo efunekayo. Isebenza kwiidivaysi ze-Android kunye ne-iOS, kunye nezinto ezilindelekileyo zomsebenzisi, kwaye zinokuqwalaselwa ukusetyenziswa ngaphandle kwe-intanethi. Esi sicelo sinezixhobo zokulandelela kunye nenkonzo yokugcina nokulawula iindlela zendawo; ukusebenzisa i-BigData Store indawo yesikhashana.
UCalero, wanikela umxholo othakazelisayo kakhulu we-ESRI oza kunika kulo nyaka kunye nalabo abaza; kwi-Geofumadas siza kulinda, ukuvavanya nokuveza ubungakanani babo.
Ukusebenzisa i-crowdsourcing ukuthola i-qualitative data yobummi - I-Aparcabicibcn
Le ntetho, ngokuzonwabisa, ephethe uCamila González, iMenenja yeProjekthi ye-Ecological Current, ibonise indlela iinkqubo zolwazi ezinceda ngayo ukuqokelela iinkcukacha malunga nezakhiwo okanye izibonelelo ezithintekayo kuluntu. Kule meko sathetha ngeendawo zokupaka ngebhayisikili, njengoko kunjalo, eBarcelona, ​​ibonisa indlela ebalulekileyo yokuthutha, kuquka neenkonzo zeemali zeebhayisikili.
UGonzáles wachaza indlela, ukusebenzisa i-crowdsourcing, ubuninzi beenkcukacha ezifanelekileyo ezivela kwizixeko zingatholakala ngokufanelekileyo. Oku kuguqulela ekudaleni iqonga elivulelekileyo kumsebenzisi, ngubani ongenza ukuqinisekiswa kwawo ngaphambi kokusebenzisa inkonzo.
Njengoko kukhangelekile njengoko kuzwakala, ukuxhamla abantu abaninzi kudinga ukubamba iqhaza okukhulu kwabasebenzisi, kunye nokubeka iliso ngoRhulumente, ukuqinisekisa ukusabalaliswa kwedatha evulekile, ngaphezu kokukwakheka kwezicelo zokusetyenziswa lula kunye nokuphathwa. Iprojekthi ibonisa ukuba nethemba lokufikelela ekupheleni, iqonga okanye inkqubo ebonisa ukufumaneka / ukubonakala kweendawo zokupaka iibhasiki, ukuba ukusetyenziswa kwayo kukhuselekile okanye ukuba imeko yayo isebenza; zombini ngokwenza izigqibo malunga nale ndlela yokuthutha, kunye nezisombululo kumsebenzisi wokugqibela.
Ngengqiqo yethu, ukunikezelwa kwecala lokuphendula ngomlilo, I-ArcGIS Enterprise eya eBombers yaseBarcelona, ​​ikhuphe i-GIS ngexesha langempela, lathiswe ngu Miquel Guilanyà. GIS yeTeccnic. INKQUBO-Bombers yaseBrazil, eyachaza ngokucacileyo ukuba kunokwenzeka njani ukwenza inkqubo yolwazi / iqonga ngexesha langempela, ukukhusela nokuphendula ngokukhawuleza kwiimeko okanye kwiimeko ezimbi.
Ngokuqhelekileyo, umcimbi wadibana nokulindela, ukuya kwinqanaba lokubonisa ulwazi olufanelekileyo, inomdla kubemi; kunye nentuthuko yeentsebenziswano eziye zaphunyezwa kwiminyaka yamuva kunye nezinye iinkampani, kunye nokunikezelwa kwamabali okuphumelela kunye nokuhlaziywa kwezicelo ze-ESRI. Ukuba ngumcimbi waseBarcelona, ​​akumangalisi ukuba amaphepha amaninzi ase-Catalan; kunye nokunciphisa oku kungavelisa kubasebenzisi abangathethiyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Inkonzo yeWebhu yamaphupha amadala phakathi kweyona ndawo ebalaseleyo yeMephu ye-Map 28-124
Post Next Ukuguqula idatha ye-CAD kwi-GIS nge-ArcGIS ProOkulandelayo »